Kuvulwe ku nineties zakuqala enhloko-dolobha Russian Carnegie Centre yasungulwa njengoba ephethwe egatsheni American yesikhwama efanayo. Umphumela womsebenzi wakhe, kuhlola kanye nokuhlaziywa isimo setepolitiki emhlabeni.
Yini wadala Carnegie eMoscow Centre
Umsebenzi oyinhloko kule nhlangano, kanye Umhlaba Foundation, ukudala izimo ezidingekile nokubambisana phakathi wonke amazwe emhlabeni.
Carnegie Foundation, ngaphezu eMoscow, has asemazweni amaningi elise States ezahlukene. Ikomkhulu Washington, DC. Engakabi yayo, Centre eMoscow angashintsha abaphathi abambalwa.
Abaholi lenhlangano eMoscow
Owokuqala wathatha izintambo, Peter Fisher, inhloko Carnegie eMoscow Centre kusukela ngo-1993 kuya ku-1994. Umhlahlandlela Wayengowesizukulwane emfushane. Khona-ke umphathi useqokwe Richard Burger, ababethi le okuthunyelwe kusuka 1994 kuya ku-1997.
Ngo-1997, Scott wathatha izintambo Brueckner, ngubani ngo-1999 salandelwa Alan Rousso, esikhundleni salokho ukufaka endaweni 2001 ngu-Robert Nurik. Ngo-2003, lesi sikhwama ephethwe Endryu Kachins. Ngo 2006 kuthiwa lathathelwa indawo Rouz Gettemyuller futhi kusukela ngo-2008 futhi kuze kube namuhla ke iholwa umqondisi samanje eMoscow Carnegie Centre Dmitry Trenin. Inhlangano ziqasha abasebenzi ngamatshumi amathathu.
Izindawo umsebenzi we Carnegie Centre eRussia
Izindawo ezisemqoka zocwaningo izinguquko zezombusazwe, ukwakheka friendly ubuhlobo phakathi kwemibuso eMpumalanga Ephakathi nase-Asia Ephakathi.
Ukunikeza kungenzeka wokubambisana phakathi ososayensi nabezombusazwe, le Carnegie Foundation okwenza kutholakale ikhambi izinkinga eziningi zomphakathi, amanani zangaphakathi nezangaphandle.
On iforamu ekhethekile wahlela ukuba kube nezingxoxo kanye nezinkulumo-mpikiswano phakathi US nososayensi Russian nabezombusazwe ukuze sithole usizo kakhulu kumphakathi emhlabeni isiqondiso ekumelaneni nombuso futhi izinguquko zalo.
Ngaphezu seminar kuhlelembisa, izingqungquthela kanye izinkulumo, okwakwenza kube lula ukuthola ithuba lokukhuluma anhlobonhlobo onegunya international abaqavile emphakathini, i-Carnegie Centre eRussia sponsors ucwaningo ezimele zomhlaba isimo sezombusazwe. It olwenziwe ukushicilela yangasese. Ikhishwe ngu inhlangano namajenali, izihloko, zincwadi ziphakathi kokulandisa okuvelele kanye nakomagazini atholakala ngezilimi Russian kanye nesiNgisi. Ngosizo Russian Centre ongayisiza ososayensi bethu ukusebenzisa ezinkulukazi ezingaba ngokwesayensi. Lokhu kufezwa ngenxa bomsebenzi kanye nesipiliyoni Zesimiso West-Eurasia, wadala e-Washington.
I Carnegie eMoscow Centre isungule imisebenzi eminingana. Kubalulekile inqubomgomo angaphandle kanye Uhlelo zokuphepha emphakathini kanye nokuphathwa lesifunda. Ezibhekwa futhi izinguquko isimo somnotho, amandla kanye sezulu nezindaba, ithuthukiswe nezinye izinhlelo ezibalulekile ngokulinganayo kwezenhlalo nakwezombangazwe.
isikhundla Carnegie Centre ezatholwa emphakathini womhlaba
I Carnegie Foundation eRussia bekulokhu ebaluleke kakhulu yesimanje umphakathi izinselele. Lena yangaphakathi futhi inqubomgomo sangaphandle Russia, isimo somnotho ezindaweni kanye emazweni ayengaphansi kweSoviet Union. Ngokukhethekile ikhokhelwa enkabeni izifunda elinezinkathazo kakhulu - eMpumalanga Yurophu, e-Asia Ephakathi futhi eCaucasus.
Izimiso eziyisisekelo yezenzo ezibhekwa umgomo indlela nezimo ezihlukene kanye nokuhlaziywa olunzulu isimo samanje. Isikhundla inhlangano maqondana nezindaba ezihlukahlukene setepolitiki zingathathi hlangothi ngokuphelele. Ngezinye Carnegie Centre engekho nhlobo noma yimuphi umkhuba ikakhulukazi zezombusazwe noma zezenhlalo. Lokhu kuhlobene yokuthi igcina hlangothi nhlobo futhi ngaphandle ubandlululo ucabangela zokusuka ezimweni ingxabano, enze okusemandleni ukuba ukusheshisa isinqumo sabo.
Lesi sakhiwo, esisogwini Tverskaya Street, umtapo litholakale emphakathini. Ngezikhathi lapho ihlelwe imisebenzi letehlukahlukene lokuhloswe ngato ekwenteni sinokuthula.
Imali Russian Carnegie Centre
Carnegie Isikhwama - yenhlangano yomhlaba wonke anikezelwe ucwaningo lwesayensi. Yena eyasungulwa ngo-1910. Isikhwama ine isabelomali esanele, futhi lokhu kwenza kwakhe nethuba lokuqhuba izifundo nocwaningo olunzulu. Njengoba ingxenye enkulu yomsebenzi nokuphuma kwemali etholakele-United States. Ngaphezu kwalokho, imali abaziwa umhlaba wonke Ford Foundation. umsebenzi wenhlangano kuhloswe ezibangela ukuzinza isimo kwezombusazwe nakwezomnotho emphakathini wonke, kwinqubomgomo kanye namazwe angaphandle yeRussia.
Minyaka yonke Carnegie eMoscow Centre umema ngokubambisana zonke inqwaba osopolitiki abadumile.
Discography kanye biography Rozenbauma Aleksandra